လင်းသန့်| November 14, 2012 | Hits:5,683
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website KHINE ZAR THWE November 15, 2012 - 2:38 pm	အမေရိကန်သမတကြီး မြန်မာပြည်လာတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် အဲ့ဒီလို လူမျိုးကို အလွန်မှလည်းတွေ.ချင်ပါတယ် တရုပ်ကတော့မကောင်းတတ်လို. ရှောက်ပြောနေတယ် ရင်ထဲကတမျိုး အပြောကတမျိုးဆိုတာ သိသာပါတယ် (အဆီအနှစ်တွေစားထားတဲ့ ၀မ်ကျားပေါင်) အထူးပြောချင်တာကတော့ တရုပ်ဆိုအယုံအကြည် လုံးဝမရှိပါဘူး တရုပ်လက်အောက်တော့ မရောက်ချင်ပါ အမေရိကန် လို လူ.အခွင့်အရေး တန်ဖိုးထားတဲ့ သူရဲ.အောက်ကျခံရတာတော်ပါသေးတယ်….